Tantara - hjravs - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Tantara - hjravs
Tapaho ny lohany
(Fizarana faha-telo amin'ny fonjan'olomarina)
Raha valin-keloka natao na tambin'ny ota vita dia azoko ekena ho famaizana ny famonjana ahy, fa raha kenda roroka atao mba hanagiazana ny marina tsy hivoaka dia hakanosana ny fanekena hogadraina ato. Nijoro teo afovoan'izy dimy lahy aho raha niteny an'izany.
- Mieritreritra ny hitsoaka 'zany ialahy, hoy i Masindahy. Amin'ny fomba ahoana anefa?
- Izay fomba fametrahan'ialahy ny baraingo izany dia efa sakana iray tsy hahafahana mandroso, hoy aho, ny fanontaniana tokony hapetraka dia hoe: inona ary no tokony hatao?
- Ka ahoana ary ny hatao, hoy izy dimy lahy saika niara-niteny.
Tamin'izay no nandalo tsy lavitra anay i Razan-be, nanao fijery nisompirana izy nanara-maso anay, tsy dia azoazony mantsy ity mitangorongorona miresaka ity. Ity Razan-be ity dia gadra mandram-pahafatiny saingy toa manana ny satany manokana izy ato fa na ireo mpiandry fonja aza vitany ny maniraka azy, afaka mivoaka manao asa any ivelany in-droa isan-kerinandro izy sy ireo roalahy namany dia i Dariry sy Baonza ary rehefa miverina avy any izy ireo amin'izany dia mivimbina ny vatsiny mandritra ny andro maromaro, mofo, ranom-boakazo, sigara, hatramin'ny môly aza. Raha ny fandinihako azy dia toa napetraka ho filohan'ny gadra ato izy, mba handemy ny sain'ireo voafonja ho kanosa tsy hanana eritreritra handositra na hikomy.
Hitako ho saika hiparitaka izy dimy lahy, namako, nahatsikaritra ny fijerin-dRazan-be, fa hoy aho:
- Araka filôzôfia Malagasy dia tsy lehilahy ny olona iray raha tsy voafora, rehefa vita didimpoitra ka "tapaka ilay lohantsitsy" dia izay vao ekena ny mahalehilahy azy, i RaZan-be no lohantsitsy eto ka mahatonga ireo voafonja valon-jato tsy hampiseho ny mahalehilahy azy, mila tapahana izany ny "lohantsitsy".
Ripaky ny hehy izy dimilahy nandre ny fanazavako. Iza no sahy hanapaka ny lohatsitsy; dia iza no hitelina azy? Izany no fanontanina nifandimby napetrak'izy ireo. Iza no sahy hanohatra an-dRazambe sy ireo lefiny roalahy izay sady samy ranjanana no mahay miady.
- F'Angaha natao tsianjery fotsiny ny fampianarana tamin'ny katesizy ny tantaran'i "Davida sy Goaliata"? hoy aho nibanjina an'i Masindahy. Hozaraintsika ny andraikitra, ka izaho no hanapaka ny lohantsitsy ary rehefa miseho ny mahalehilahy ireo voafonja dia ianareo no mandrehitra ny afon'hambompo, fa raha "mur 35" sy izay tariby kely, sady notondroiko ilay tamboho sy ireo grillage fefy avy ato anatiny, tsy hahasakana valonjato lahy liam-pahafahana.
Nihatokatoka izy dimilahy niaiky ny risi-po nasehoko.
- Samia ary, maka saina handinika ny tokony ataony avy hoy aho, nijoro ho mpitarika.
Naka toerana mitokana aho hisainako ny fomba handresena an'i Razan-be sy ireo lefiny. Naveriko nodinihana ny fomba fiadin'izy ireo rehefa ilay manao batemy ireo voafonja iny izy, ka izao no voamariko: Raha manainga ny tanany havanana i Razan-be dia fanairana fotsiny iny fa katro-doha izay no mandeha, ary raha ny tanany havia no miainga dia ny havanana no mipetaka. Ny azy roalahy lefiny indray dia toa vatana fotsiny fa tsy dia misy ainga. I Dariry tsy mahay mampiasa afa-tsy ny tanany roa fa angamba boxe no haiady an-kafiziny, ny an'i Baonza indray, dia ireo tongony roa no mba hainy manainganainga fa toa mba nanaonao karaté izy tamin'ny fahazazany.
Rehefa vonona tsara aho dia nanatona azy dimy lahy izay mikaon-doha fatratra, tsy nanapaka ny resak'izy ireo izay hitako ho manga dia manga aho, fa ny ankihiben-tanako havanana no naingaiko, ho fanehoako ny fahavonako. Niara-nanainga ny ankihibe-ny avy koa izy dimilahy, hilaza fa efa maty paika koa ny tetika novolavolainy.
Hiantsy ady amin-dRazan-be avy hatrany no hataoko. Teo afovoan-tokontanin'ny fonja indrindra i Clara, ilay sarim-bavy sipan-dRazan-be ato. Avy dia nohatoniko io, ary nosafoiko tamin'ny vohon-dratsatanako ny fitombenany.
- Andray, hoy i Clara, Tsy mba miafinafina akory 'ty fa eo ambany mason-dRazan-be no manao an'izany, iny ary izy iny fa tamy, maty ty anio.
- Ka 'zah hila vaniny mihitsy, hoy aho. Nanaikitra ny fintana, tsy tantin-dRazan-be tokoa ny fikitikitihana an'i Clara. Nivatravatra avy any ny lehilahy, izaho kosa niandry nandinika izay ho fihetsiny. Iny fa niainga ny tanany havanana, naforitro moramora ny lohaliko fa fantatro fa katro-doha avy hatrany no alefany. Tsy diso ny kajy. Somary nitsambikina aho hampifanandrify ny lohaliko amin'ity karan-doha tsy mahalala 'zay miandry azy.
KKRPAAK. Taolan-dohalika sy tampon-doha 'zany mifampiarahaba izany. Tena na tsy torana amin'iny aza, telo minitra vao miverina amin'ny laoniny ny fahatongavan-tsainy.
Nihoraka ireo voafonja, izay somary nentanin'izy dimy lahy namako, ka indreny nirodorodo hitangorona fa sambasamba nisy sahy nampihinana an'i Razan-be. Indreny koa i Dariry sy Baonza fa nivatravatra avy any. Tsy tantiny ny nahita ity sefony nihosom-bovoka ka nentim-po fatratra, avy hatrany dia nidirako teo afovoany mba hifanandrifiany tsara. Nirimorimo ny totohondrin'i Dariry, nandrivorivo ny dakan'i Baonza fa tamim-pahakingana ny tsingolobatitako niala tao afovoan-dry zalahy, ka ny lamakom-bavan'i Baonza no voakendrin'i Dariry ary tany am-pototsofin'i Dariry no niantefa ny dakan'i Baonza.
Horakoraka tsy hifandrenesana ny an'ireo voafonja. Hitako soritra teny amin'ny handrin'izy rehetra ny hasahiana. "Izay vao tena lehilahy hoy aho, fa tapaka ny lohantsitsy".
(Hitohy amin'ny fizarana faha-efatra "Ny atao hoe Tafibahoaka".)
Sokajy : Tanindrazana, tantara
fenohasimpitia (15/10/2016 08:06:34)
M'lay rangah, fa aza atao ela ny tohiny fa mahalina b!
fenohasimpitia (15/10/2016 08:08:12)
Nga tsisy aponga sy mozika t@lé lohantsitsy tapaka e?
Mpanoratra : hjravs
Nampiditra : hjravs
Daty : 14/10/2016
Mpamangy : 1797
Tantara : FONJAN'OLO-MARINA
AVERENO NY SARINY
IZAY HIRA IZAY